Betting Strategies | Express Sports & Casino Betting | chimbidzika & nyatsoshanda Access
Kangani Unofunga rokuti 'mukana mutambi' akabata zvakanaka? Kwete kazhinji munyika yemitambo vachitamba, ndinoti.
Vazhinji vedu tiri pamusoro pfungwa kuti wose vachibhejera zvinhu ari mitambo anowana pakupera kwezuva chero ivo kutamba kakawanda uye refu zvakakwana.
Izvi hazvisi hazvo kwechokwadi.
Tose tinoziva kuti bookmakers nguva dzose kuva mupendero pamusoro vatambi, uye abate kiyi nokutamba makadhi. Dai chete kwaiva nzira kunyange kubva kumucheto, kutamba zvakanaka uye mativi; Kudai mutambi zvakare aiva nani ose neapo.
tsime, Sezvineiwo zvakakwana; pane nzira! A zvakanaka uye zvakarongeka vachitamba nzira anogona kukupa mupendero.
Heino Kutarira rimwe kukosha zvinobatanidzwa yemhando vachitamba nzira. Ndiri guessing munoziva nzira yako kumativi zvinokosha, nokuti yemhando mari Kukosa vachitamba nzira tiri vatambi avo wabatwa takabhabhatidzwa bhizimisi uye vane zvinokosha orudyi.
Understanding Pfungwa dzakadai kutarisirwa ukoshi (EV)
Zvinotarisirwa ukoshi (EV) ndiyo imwe nzira inokosha iri vachitamba bhizimisi. Saka hazvishamisi kuti ichingori anowanzoshandiswa zano iri vachitamba chiitiko.
Ngationei muenzaniso kunzwisisa izvi zvikuru coherently.
Toti uye ini ukasarudza kuva machisi kuti basketing balls- tsime, Ndinoreva chaizvoizvo! Nokuti bhora ose kuti iwe bhasikiti, Ndinobvumirana kuti kubhadhara iwe $1. Saizvozvowo, nokuti bhora ose kuti ini tswanda iwe neni kubhadhara $1.
Betting Strategies Blog Will Mberi Mushure bhonasi Table pazasi
ikozvino, zvatinogona basketballs kuti chii zvingaita segore chairo uye vachiri hatina weNobel. Izvi imhaka yokuti mutemo Avharenji anobata uye zvose $1 Ndinoita I vanoguma kurasikirwa nayo anenge pakarepo. bheji Izvi seva kwazvakarerekera ukoshi umo pakupedzisira zvinogona kuva mukana zvakayenzana swinging kana nzira
Ikozvino kuwedzera zvakasiyana divi pauri; Toti kuneta basketing balls uye sarudza kusiya mutambo. ikozvino, Ini Ukuwo vanofunga kuti ndiri inching akananga munhu Win uye munhuhwi kukunda. I zvimwe kushandisa kuti vabvume kugara uye kutamba kwenguva yakareba nokubvuma kubhadhara iwe chimwezve 50 masendi zvose bhora iwe bhasikiti. You Zvisinei, kunamatira yako vachitamba nzira uye kuramba kubhadhara ini $1 sezvo akabvuma pamberi.
Cherechedza kuti pane kamwe chaishanda kusakundika. Pane mukana wose kuti aite $1.50 uye kurasikirwa chete $1.00 mu kudzokera. Naizvozvo iwe Vanobatsirwa 50 cent zvose 1 kuedza kubudirira mune. Izvi zvinoitawo kuti zvakanaka tarisiro (+EV) pamusoro 50 cent. zvisinei, souya kubhadhara ini mari iyi, I vanoguma kutambura zvakaipa zvinotarisirwa ukoshi (-EV) pamusoro 50 cent. For vakabudirira vachitamba, pfungwa chinofanira kuwana uye kuwana + EV vachibhejera zvinhu uye kudzivisa -EV anorasikirwa.
Betting Strategies Blog nokuda Sports.expresscasino.co.uk. Rambai What iwe kuhwina!
Sports Betting Site | Express Sports uye Casino |…